सर्वोच्चको झट्काले नयाँ अफिसरहरुको बेजोग, के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
सर्वोच्चको झट्काले नयाँ अफिसरहरुको बेजोग, के हो यथार्थ ?
काठमाडौँ। लोकसेवा आयोगले २०७६ साल मंसिर २५ गते ५६० जना शाखा अधिकृतको दरवन्दी देखाउँदै विज्ञापन गर्यो । लोकसेवा आयोगले विज्ञापन माग गरेपछि झण्डै २७ हजारले अफिसरका लागि फारम भरे । लोकसेवाले २०७६ साल माघ २५ गते पहिलो पत्रको परीक्षा लियो, जहाँ ३ हजार ३५३ जना सर्ट लिस्टिङ भएर अगाडि बढे ।
त्यसपछि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै लोकसेवाको दोस्रो पत्रको परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रम नै बन्द भयो ।तर त्यसको १० महिनापछि २०७७ मंसिर महिनामा फेरि थप ११४ जना शाखा अधिकृतका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्यो । पहिले नै प्रथम पत्र दिइसकेका परीक्षार्थीले झन्डै १ वर्ष २०७७ पुष तेस्रो सातामा दोस्रो पत्रको परीक्षा दिए ।
कुल ३ हजार ३५३ जनामध्ये दोस्रो पत्रबाट ६३० जना छनोट भए । र, अफिसरका लागि सीप परीक्षण तथा मौखिक अन्तरवार्ता कुरेर बसे ।तर यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो । २०७७ साल पुष ९ गते सर्वोच्च अदालतमा नयाँ शाखा अधिकृतका लागि दोस्रो पत्र नलिन माग गर्दै अनुज घिमिरे समेत रिट निवेदन लिएर गए ।
त्यसपछि पुष १२ गते चढेको पेसी पक्षको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भयो । पुष १३ गते चढेको पेसी बेन्च बस्न नभ्याएर हेर्न पाइएन भने पुष १५ गतेको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो ।त्यसैगरी पुष १६ गतेको पेसी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पर्यो । पुष १७ गते चढेको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा पुग्यो । बल्ल पुष १९ गते चढेको पेसीमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलमा झिकाउने आदेश दियो ।
यतिसम्म त ठीकै थियो । तर २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा यही विषयमा रिट निवेदन पर्यो । आफूहरुले पनि संघमै बस्न पाउनुपर्ने भन्दै फारम भरेको तर आफूहरुलाई पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरी अन्याय गरेको र संघमा नयाँ नियुक्ति पाउने शाखा अधिकृतभन्दा आफूहरु पहिले नै नियुक्ति पाएका आफूहरु जुनियर बन्ने अवस्था आएकाले संघमा रहेका खाली पदहरुमा समायोजन गरिपाउन माग गरिएको थियो ।
अनमोल भट्टराई, सुशीला केसी, प्रवीण खनाल, विनोद कान्त झा, मनोज कुमार झा लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार चुडालको एकलज इजलासले २०७८ भदौ ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । यसरी फेरि संघमै समायोजन गरिपाउँ भन्ने शाखा अधिकृतको सङ्ख्या १२० जना थियो ।
यता करिब ३ वर्षदेखि जागिर, व्यापार व्यवसाय सबै छाडेर सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि अध्ययन गरेकाहरु अन्तिम समयमा अफिसर बन्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने लागेको भन्दै चिन्तामा छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले कम्तमिा १५४ जना ‘अफिसर’हरुले जागिर नपाउने पक्काजस्तै भएपछि उनीहरु पनि सर्वोच्चमा रिटका साथै नयाँ आन्दोलनको तयारी गरिरहेको एक परीक्षार्थीले ईमानदार मिडियालाई बताए।